कस्को प्रेममा छिन् सुहाना थापा ? अन्तर्वार्तामा खुलाईन् सबै कुरा – Sandes Post
March 28, 2022 336
नायिका सुहाना थापाले आँफु प्रेममा रहेको संकेत गरेकी छिन् । एपी वान टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘ग्ल्यामर गफ’मा सहकर्मी तथा अभिनेता अनमोलसँगै अन्तरवार्ता दिने क्रममा आफ्ना एक मिल्ने साथी भएको भन्दै उनले प्रेममा रहेको संकेत गरेकी हुन् ।
थापाको त्यो अभिनयलाई दर्शले अत्याधिक मन पराएका छन् । ए मेरो हजुर’ ३ बाट नै फिल्मी क्षेत्रमा पाइला राखेकी सुहाना थापा अहिले युरोपमा आफ्ना दिनहरु बिताएकी छिन् ।
यही फिल्म प्रदर्शनीका लागि युरोप गएकी सुहाना युरोप पुगेपछि निकै बोल्ड भएकी छिन् । उनले आफ्ना बोल्ड अबतारका तस्विरहरु इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छिन् । थापा यि तस्विरमा निकै हट देखिएकी छिन् ।
Prevब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि केजीको कति ?
Nextपल शाहलाई जेल पठाएकै दिन पलको अर्को सशक्त भिडियो बाहिरियो, पलको कामको चौतर्फी चर्चा, हेर्नुहोस् भिडियो